दुई टाउके सर्प देख्नुभएको छ ? हेर्नुस् यस्तो छ - Everest Dainik - News from Nepal
दुई टाउके सर्प देख्नुभएको छ ? हेर्नुस् यस्तो छ
काठमाडौं : दुइटा टाउको भएको एउटा दुर्लभ सर्प अमेरिकाको न्यूजर्सी राज्यको जङ्गलमा फेला परेको छ । टिम्बर र्याटलस्नेक जातको सो बच्चा सर्पलाई ‘डलब डेभ’ नाम दिइएको छ । सो जातको सर्प विषालु हुन्छ ।
एउटा पर्यावरणीय समूहले उक्त दुई टाउके सर्पलाई गत महिना फेला पारेको थियो । यो सर्पको दुईवटा पूर्ण विकसित शिर छन् । तिनमा दुईदुईवटा गरेर चारवटा आँखा र एकएकवटा जिब्रो छन्। ती अङ्ग क्रियाशील छन् । तर शरीर भने टाउकोमुनि एउटै छ ।
प्राकृतिक वासस्थानमा उसलाई बाँच्न गाह्रो हुने पर्यावरणविद् डेभ श्नाइडर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भाग्न खोज्दा उसको शरीर साह्रो हुन्छ र त्यसो हुँदा ऊ सजिलै अरू जीवको सिकार बन्न सक्छ ।’
सङ्कटापन्न र जोखिमा परेका सरिसृपहरूबारे अध्ययन गर्ने हर्पेटोलोजिकल असोशिअट्स नामक संस्थासँग आबद्ध श्नाइडरका अनुसार उनी र उनका एक सहकर्मीले अगस्ट २५ मा पाइन ब्यारन्सको जङ्गलमा डबल डेभलाई फेला पारेका थिए । र्याटलस्नेकले बच्चा जन्माएको हेर्दैगर्दा उनीहरूले दुईटाउके सर्प फेला पारेका थिए ।
शरीर जोडिएका जुम्ल्याहाको जन्म भएको जस्तै एउटै भ्रूणबाट दुईटाउके सर्पको पनि उत्पत्ति हुन्छ । श्नाइडर र उनका सहकर्मी दुवै जनाको नाम डेभिड भएकाले उनीहरूले सो सर्पलाई डबल डेभ नामकरण गरे ।
श्नाइडरले सो दुर्लभ सर्प आफूले राख्न र अध्ययन गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायबाट विशेष अनुमति लिएको बीबीसीलाई बताए ।
ट्याग्स: दुई टाउके सर्प, हर्पेटोलोजिकल असोशिअट्स